Awusiye Fortune 500 | Martech Zone
Awusiye Fortune 500
ISonto, Ephreli 22, 2012 NgeSonto, Septhemba 8, 2013 Douglas Karr
URoger Yu wase-USA Today usanda kubhala udaba ezinsukwini ezimbalwa ezedlule ku izinkampani ezishiya ukubhuloga:
Ngokuvela kwezinkundla zokuxhumana, izinkampani eziningi zishintsha amabhulogi ngamathuluzi we-nimbler adinga isikhathi esincane nezinsizakusebenza, njenge-Facebook, iTumblr ne-Twitter.
I-athikili yonke ilinganiselwe kahle… kepha imininingwane ingahle imelele kabi zonke izinkampani. Okokuqala, idatha ekhonjisiwe ivela ezinkampanini ze-Fortune 500 ezikhula ngokushesha. Le yinganekwane endala yokuqhathaniswa nokuhlanganiswa. Ingabe izinkampani zishiya ukubhuloga ngoba isu alibasizi ukuthi bakhule noma bashiya ukubhuloga ngoba bekhula?
Kusenezinhlangano eziningi ezinkulu ezishicilela okuhle amabhulogi ezinkampani. Futhi angilona uhlobo lomuntu ongathi ukubhuloga isu eliphelele lawo wonke amabhizinisi. Uma unomkhiqizo omuhle, abalandeli abalandelayo futhi uyinkampani ekhulayo, enenzuzo… ungahle weqe ukuphathwa kwebhulogi yebhizinisi. Lokho akusho ukuthi amaqhinga inkampani yakho ayisebenzisayo awabizi njengokubhuloga ezinkampani… ungahle uchithe isikhathi esiningi nemali kwamanye amandla wokumaketha nobudlelwano bomphakathi kunokuba ucabanga.
Kepha awuyona yezinkampani ezikhula ngesivinini esikhulu kwi-Fortune 500, akunjalo? Ngabe inkampani yakho iyaziwa ezweni noma emhlabeni jikelele? Ngabe ubonwa njengomholi ocabangayo embonini yakho? Ingabe ungumkhiqizo othenjiwe futhi onegunya olalelwa yimboni? Ingabe ulawula imiphumela yosesho? Ingabe unayo isabelomali sokumaketha nenkululeko yokwakha lelo su usebenzisa ezinye izindlela?
Njengoba kunikezwe izinsizakusebenza, angifanele ukubhlogela inkampani yami, noma. Ngingatshala imali ethe xaxa ebudlelwaneni bomphakathi, uxhaso, ngikhangise futhi ngicindezele ukukhuluma emicimbini ezweni lonke. Kepha lokho ukunethezeka engingakwazi ukukukhokhela. Ukubhuloga kungisebenzela kahle ngoba ngingonga isikhathi namandla… zombili izinsiza ezibizayo kepha engihlala ngikuthola ukukhulisa ibhizinisi lami ngazo.
Ukukhathazeka kwami ​​ngalo mbhalo ngukuthi, uma uthi nhlá, izinkampani zingabheka le ndatshana bese zikuthola kuyisaba esikhulu sokungabheki ukubhuloga njengecebo elingenzeka. Isinqumo sokutshala imali kucebo lokubloga sinzima kakhulu kunokumane ubheke ukuthi iFortune 500 yenzani. Ukubhuloga is utshalomali lwesikhathi eside oludinga ukuzinikela, izinsizakusebenza namasu okwenza lusebenze kahle.
Ngokwami ​​ngikholelwa ukuthi izinkampani eziningi ziyayikhokhela ibhulogi ngoba azinikezi imiphumela esheshayo efunwa ezinye izinkampani ezinkulu. Kuhlala kulula ukukhokhela ukuthenga ukunakwa ukuze unakwe… umbuzo awusebenzi, kuyindaba yokuthi isikhathi esingakanani, malini nokuthi kungani ungafaka isu elilodwa kunelinye.
Enye incwadi, futhi akumangazi kimi ukuthi imithombo yezindaba emikhulu enezintatheli eziqeqeshiwe, abahleli kanye nabashicileli izobhala ngokungalungile kokubhuloga. Vele uthi!
Tags: ibhulogiukubhuloga ezinkampaniinhlanhla 500inhlanhla
Izeluleko ezi-5 eziphezulu ze-Survey Greatness